Sidee Ukasban Kartaa Quluubta Xaaskaaga? - iftineducation.com
aadan21 / December 23, 2011
Dumar dhamaaantii waa isku mid balse waxaa jirto in lagu kala duwanyahay dhaqamada iyo diinta, waxaa xaqiiqo ah dumarka kale ee aan nagu diinta aheyn sida aay jeceylyihiin in uu lamaanahooda unoqdo in aay dumarkeena soomaaliyeedna sidaa jaceylyihiin.
Baaritaan badan oo aan sameeyay ayaan waxaan ku ogaaday in Dumarka qaar amaba raga qaar xataa markii aay daawadaaan Aflaanta Jaceylka ah, durbadiiba aay xasuustaan lamaanahooda ayagoo qisadaas aay daawanayaan lameel dhigayo.
Raga aan aniga kamid ah Ee jaceyl xaasaskooda waxaan halkaan ugu soo bandhigayaa dhowr qodob oo aay kukasban karaaa quluubta xaaskooda aayna ku abuuri karaaan qoys farxad kuwaaro.
Ogoow ninkii nasiib uyeeshay ee xaaskiisa lajoogoow qodobadaaan inaad ka faaideysatid, halka raga qaar ee kamaqan xaasaskoodana aan usoo gudbin doono qodobo noo xigi doono maqaalkan.
Xataaa waxaaan soo qaaadan doonaa dumarka xaaska ah sidii aay kukasban laheyd quluubta ninkeeda, insha allah dhowr maqaal oo isdaba xigto ayaan kusoo kala daabici doonaaa.
Aan kuhormaro qodobada maantay aan kusoo qaadanayo ninka xaaskiisa Lajoogo siduu Ukasban lahaa quluubta Xaaskiisa.
Xaaskaaga markii aad lasheekeysaneysid haku jarin hadalka aay kuu wado oo dhageyso ha isku dayin inaad iska mashquuliso isku day inaad dhageysato illaa aay kadhameysato hadalkeeda, hadii aad maalin weliba dhowr iyo toban daqiiqo aay kuusheekeyso aad dhageysato hadad siiso waxaa xaqiiq ah in aay wax weliba kuusheegan donto sxbna aay kaadhigan doonto. Hadii aad sidaa caadeysato waxaa kuusoo bixi doono natiijo aad uwanaagsan.
Maalin weliba isku day inaad lasameyso romantic adiga oo usheekeynayo marna ayada aay kuusheekeyneyso, salaadaha qaarna isla tukada.
Markii aay cuntada kuukeento aay saxanka sii dhigtaba kashumi gacanteeda oo umahadnaq.
Mararka qaar hadii aad soo toosto ayadoo jikada kujirto adne aad shaqo ama magaalada aadeyso, waraaq yar ugu qor waan kujeclahay Macaanto.
Mararka qaar sameey inaad wada cayaartaaan oo xambaar lakaftan, aniga nafteyda ayeyba xusuus igu reebtay dumarkaba iskadaayeee.
Dumarka waxaa kaloo aay jeceylyihiin ninka markii aay gogasha diido kusoo celceliyo adne haka daalin midaaa, Waxaa kaloo jiro siyaabo faro badan oo dumarka lagu soo jiito balse adigu intaas isku day hadii intaas aad joogteysato aad kudareemi weeyso isbadal, xaaskaaga inaad barato dabeecadeeda ayaad ubaahantahay ee dib ugu noqo xiligii haasaawaha ee shukaansiga.
Maantay intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa intii aan dib ugu kulmi doono qodobo midkan lamid ah haduu eebe ogolaaado.
Qeebtii 1aad, Dadka sida fudud ku taajiray (Qeebtaan waxaan uga hadli doonaa nin Somali ah oo si fudud ku taajiray)